Fampianarana: miverina tsikelikely mampianatra ireo mpampianatra | NewsMada
Fampianarana: miverina tsikelikely mampianatra ireo mpampianatra
Efa maro ireo sekolim-panjakana, ny EPP, ny CEG ary ny lycée niverina manokatra sekoly, mampianatra ireo mpampianatra ao aminy ary niantso ireo mpianatra hiverina ambony dabilo. Manomboka tonga saina ireo mpampianatra ary mahatsapa fa manao kely tsy mba mamindro amin’ireo zanaky ny Malagasy tsy manan-tsiny manoloana ny tolona lavareny sy ny fampikatsoana ny fampianarana.
Mahatsapa ihany koa ireo mpampianatra maromaro fa mivaona amin’ny resaka politika ny fitakian’ny mpampianatra ka lasa fandrebirebena ny sain’ny maro sisa. Misy ireo mpamadika ny tolona ka mitaky ny tombontsoany manokana ao anatin’ny hetsika fa tsy mitaky intsony ny tombontsoa iombonana.
Misy amin’ireo miseho ho mpitarika tolona no mangataka toerana politika sy asa ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Mahatsiaro ho voafitaka sy hatao tohatra fiakarana, araka izany, ireo mpampianatra sasany ka nanapa-kevitra tsy handray anjara intsony amin’ny tolona ary hiverina hampianatra amin’izay ho tombontsoan’ny ankizy.
“Tsy midika akory izany fa hivadika amin’ny tolona iombonana amin’ny fitakiana tombontsoa iraisana izahay fa kosa manda tanteraka ny hatao tohatra fiakarana ho an’ny sasanya”, hoy hatrany ireo mpampanatra.
Ankoatra izay, misy ireo mikatsaka mihitsy ny taona fotsy ireo mpitarika fitokonana izay tsy eken’ny sain’ny ankamaroan’ny mpampianatra ny hisian’izany. Ny sasany amin’ireo mpitari-tolona ireo, mikatsaka mafy ny hanakorontanana ny fandrafetana ny laza adina amin’ny CEPE sy ny BEPC izay natonta any amin’ny Cnapmad, raha ny filazan’ireo mpampianatra tafaresaka taminay hatrany.